Mareykanka oo go'aan cad ka qaatay geedi u socodka doorashada Galmudug
Dalalka danaha ka leh maamulkan ayaa saameyn waxay ku leeyihiin coddeynta oo xifaaltan culus uu ka jiro.
MUQDISHO, Soomaaliya – Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa kulan la yeelatay laba kamid ah murashaxiinta doorashadda Galmudug.
Cabdiraxmaan Odowaa, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya, iyo Kamaal Guute, oo xisbiga Wadajir ka tiran ayaa la fariistay safiirka.
Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda ayaa lagu shaaciyey in ay kawada hadleen geedi u socodka coddeynta.
Warka ayaa lagu xusay in ay isla soo qaadeen baahida loo qabo in geedi u socodka doorashada ay noqoto mid daahfuran oo loo dhan yahay.
Illo ku dhow safaaradda ayaa u sheegay warsidaha Garowe Online in xukuumadda Washington dooneyso in doorashadda ay noqoto mid ka fog farogelin isla markaana hanaankeeda uu yahay mid daahfuran.
"Hay'addo dowladeed oo xoogan ayaa adkeysi badan leh oo la tacaali kara qalalaasaha bini'aadanimo, ciribtirka argagixisadda iyo abuurista nabad, xasilooni iyo barqaada Soomaaliya," ayaa lagu yiri qoraalka.
Villa Soomaaliya oo ku eedeysan farogelinta doorashooyinka maamuladda ayaa murashax gaar ah u dirstay Galmudug kaasoo xukuumadda ka tirsanaa.
Axadii, 1-da December 2019, ayay ahayd markii danjiraha Mareykanka, Donald Yamamota, uu qaabilay madaxweynaha 7aad ee Soomaaliya ahna hogaamiyaha Madasha Xisbiyadda Qaran, Shariif Sheekh Axmed.
Kulanka ayaa xooga lagu saarey doorashadda soo aadan ee Soomaaliya, xaaladda xisbiyadda iyo khilaafka maamulada iyo dowladda federaalka.
"Waxaan kaloo la wadaagnay in marna aanan raali ka ahayn dib u dhac iyo waqti kordhin loo sameeyo dowladda oo ay waajib tahay in doorasho la aado," ayuu Shariif ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga.
Doorashadda Galmudug oo qorshuhu ahaa in ay qabsoonto bishaan December ayaa waxaa dib loogu dhigay muddo todobaad ah sidii loo dhameyn lahaa tabashooyinka imaanaya mucaaradka, Ahlu Sunna iyo bulshooyinka.
Maamulka Galmudug ayaa la dagay khilaafaad siyaasadeed iyadoo hadda uu socdo...
Soomaliya 03.02.2020. 12:20
Deni oo magacaabey wakiilka dowladda Puntland ee Mareykanka
Puntland 22.09.2019. 06:48
Soomaali lagu helay dambi uu ciqaab adag ku muteysan karo
Caalamka 11.09.2019. 23:00